ကြှနျမ သူ့ကို မုနျးလိုကျခငျြပွီ … – Shinyoon
ကြှနျမ သူ့ကို မုနျးလိုကျခငျြပွီ …အခဈြကွီးရငျ အမကျြကွီးတယျဆိုတဲ့ စကားအရဆိုရငျ ကြှနျမ သူ့ကို အကွီးကွီးခဈြခဲ့ပွီးပွီလေ … အခုလောကျဆို မုနျးမယျဆိုရငျတောငျ မုနျးလောကျတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှမှေ အမြားကွီးပါပဲ ။
တခြို့ရကျတှမှော .. သူ့အနားမှာရပျနရေပျနရေငျးကနမှေ ကိုယျတဈယောကျတညျး ဖွဈနသေလို အထီးကနျြလာရတယျ ။ ဘာကွောငျ့လဲတဲ့ … သူက ဂရုမစိုကျဘူးဆိုတာထကျကို ပဈထားတတျလှနျးခဲ့တာ တခြို့ရကျတှမှော အသကျမှ ရှိသေးရဲ့လားလို့ တှေးရလောကျတဲ့အထိကို အဆကျအသှယျတှပွေတျတယျ ။
သူက ကိုယျ့အတှကျ အရာရာပါဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ နရောတကာမှာ အရေးပါခဲ့ပမေယျ့ သူ့အတှကျတော့ … ကိုယျကလှဲရငျ ကနျြတာအားလုံးဟာ အရေးပါနမှေနျး တဖွေးဖွေး သိလာခဲ့တယျ ။ ဘယျသူနဲ့ပဲ ယှဥျယှဉ် ကိုယျက အားလုံးရဲ့ အနောကျမှာခညျြးပါပဲ ။
သူ့ကို အားကိုးဖို့ နနေသောသာ သူ့ရှမှေ့ာ မကျြရညျတှေ ကလြာမိမှာကို တဖွေးဖွေး ကွောကျရှံလာခဲ့တယျ ။ ဘာကွောငျ့ ငိုနတောလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှထေကျ ကြှနျမ မကျြရညျတှကေို သူက စိတျပကျြသယောငျတှပေဲပွတယျ ။ မငိုစခေငျြဘူးဆိုတဲ့လူက သူပါပဲ ငိုစခေဲ့တဲ့လူကလဲ သူပါပဲ … ဒါပမေယျ့ သူရှနေ့ောကျ မငိုဖွဈတော့ဘူး။
တကယျဆို … ခဈြသူဆိုတဲ့ ခေါငျးစဥျတဈခုအောကျမှာ မိနျးမသားဖွဈတဲ့ကြှနျမကပဲ ဦးအောငျစချေါရမယျ ။ ငိုနတေဲ့မကျြရညျတှကေို ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ သုတျရတယျ ။ ဘယျသူ့ကွောငျ့ပဲ အဆငျမပွမေပွေ ကြှနျမရဲ့ အပွဈလို့ ခေါငျးစဥျတပျတယျ ။
အစကတော့ သူမခဈြပွတတျခဲ့ဘူးလို့ထငျခဲ့တာပါ ။ တဖွေးဖွေးသိလာခဲ့တာကတော့ .. သူကြှနျမကို ဘယျတုနျးကမှ မခဈြခဲ့တာပါပဲ …. ကိုယျခဈြနလေို့သာ ကိုယျခဈြတာခံခငျြလို့သာ ကြှနျမလကျကို မလှတျတဲ့ သူ့ကို တဖွေးဖွေးနဲ့ ကြှနျမ မုနျးပဈခငျြလာပွီ ။ သူ့ကို သိပျခဈြပမေယျ့လဲ ကြှနျမ အရမျးကို ပငျပနျးလာတဲ့အခါ သူ့ကို မုနျးပဈခငျြလာခဲ့ပွီ ။
ကျွန်မ သူ့ကို မုန်းလိုက်ချင်ပြီ …အချစ်ကြီးရင် အမျက်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ စကားအရဆိုရင် ကျွန်မ သူ့ကို အကြီးကြီးချစ်ခဲ့ပြီးပြီလေ … အခုလောက်ဆို မုန်းမယ်ဆိုရင်တောင် မုန်းလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေမှ အများကြီးပါပဲ ။
တချို့ရက်တွေမှာ .. သူ့အနားမှာရပ်နေရပ်နေရင်းကနေမှ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်နေသလို အထီးကျန်လာရတယ် ။ ဘာကြောင့်လဲတဲ့ … သူက ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာထက်ကို ပစ်ထားတတ်လွန်းခဲ့တာ တချို့ရက်တွေမှာ အသက်မှ ရှိသေးရဲ့လားလို့ တွေးရလောက်တဲ့အထိကို အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တယ် ။
သူက ကိုယ့်အတွက် အရာရာပါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ နေရာတကာမှာ အရေးပါခဲ့ပေမယ့် သူ့အတွက်တော့ … ကိုယ်ကလွဲရင် ကျန်တာအားလုံးဟာ အရေးပါနေမှန်း တဖြေးဖြေး သိလာခဲ့တယ် ။ ဘယ်သူနဲ့ပဲ ယှဉ်ယှဉ် ကိုယ်က အားလုံးရဲ့ အနောက်မှာချည်းပါပဲ ။
သူ့ကို အားကိုးဖို့ နေနေသာသာ သူ့ရှေ့မှာ မျက်ရည်တွေ ကျလာမိမှာကို တဖြေးဖြေး ကြောက်ရွံလာခဲ့တယ် ။ ဘာကြောင့် ငိုနေတာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေထက် ကျွန်မ မျက်ရည်တွေကို သူက စိတ်ပျက်သယောင်တွေပဲပြတယ် ။ မငိုစေချင်ဘူးဆိုတဲ့လူက သူပါပဲ ငိုစေခဲ့တဲ့လူကလဲ သူပါပဲ … ဒါပေမယ့် သူရှေ့နောက် မငိုဖြစ်တော့ဘူး။
တကယ်ဆို … ချစ်သူဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာ မိန်းမသားဖြစ်တဲ့ကျွန်မကပဲ ဦးအောင်စခေါ်ရမယ် ။ ငိုနေတဲ့မျက်ရည်တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သုတ်ရတယ် ။ ဘယ်သူ့ကြောင့်ပဲ အဆင်မပြေမပြေ ကျွန်မရဲ့ အပြစ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်တယ် ။
အစကတော့ သူမချစ်ပြတတ်ခဲ့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာပါ ။ တဖြေးဖြေးသိလာခဲ့တာကတော့ .. သူကျွန်မကို ဘယ်တုန်းကမှ မချစ်ခဲ့တာပါပဲ …. ကိုယ်ချစ်နေလို့သာ ကိုယ်ချစ်တာခံချင်လို့သာ ကျွန်မလက်ကို မလွှတ်တဲ့ သူ့ကို တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျွန်မ မုန်းပစ်ချင်လာပြီ ။ သူ့ကို သိပ်ချစ်ပေမယ့်လဲ ကျွန်မ အရမ်းကို ပင်ပန်းလာတဲ့အခါ သူ့ကို မုန်းပစ်ချင်လာခဲ့ပြီ ။
မနခေငျြလို့ ထှကျသှားပါမယျဆိုရငျ အသာတကွညျနဲ့ လကျတှဲဖွုတျပေးနိုငျတဲ့အထိ ရငျ့ကကျြပါ